Tale jeneralin'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka: ny efitrano fitsanganana ihany no ho avy tsy ho ela ao VivaColombia
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Tale jeneralin'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka: ny efitrano fitsanganana ihany no ho avy ao VivaColombia
Tale jeneralin'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka: ny efitrano fitsanganana ihany no ho avy ao VivaColombia
Tsy ela dia hitan'ireo mpandeha fa efitrano fijanonana ihany no ao amin'ny efitranon'ny zotram-piaramanidin'izy ireo - izany no nahatonga ny mpanorina ny VivaColombia William Shaw.
Ny hevitra ny fanesorana seza mba hahafahan'ny mpandeha mijanona amin'ny sidina lavitra dia efa nivoatra nandritra ny taona maro. Ankehitriny, ny tale jeneralin'ny zotram-piaramanidina Kolombiana dia manantena ny hanafoana ilay drafitra amin'ny farany.
"Misy olona any izao izay manadihady raha afaka manidina ianao - tena liana amin'ny zavatra rehetra mahatonga ny dia tsy dia lafo izahay", hoy i Shaw tamin'ny Miami Herald.
“Iza no tsy miraharaha raha tsy manana rafitra fialam-boly misidina mandritra ny adiny iray ianao? Iza no mieritreritra fa tsy misy gorodona marbra… na hoe tsy hahazo voanjo maimaimpoana ianao? ”
Ny fahitana ny fiaramanidin'i Shaw vita marbra ihany no ivoahana amin'ny tany dia tombantombana avy amin'ny rehetra, fa tsy izy no tompon'andraikitra voalohany amin'ny kaompaniam-pitaterana hanandrana hanao dia lavitra ny omby.
Tamin'ny 2003, nanidina ny volavolan-seza ho an'ny fipetrahana aloha i Airbus izay mety hangataka ny mpandeha hiankina amin'ny vodin'ny sezany ary hametraka ny tongony eo ambonin'ny lasely.
Ny mpitatitra teti-bola Irlandey Ryanair, izay manana ampahany amin'ny VivaColombia, dia nanolotra faritra nijoroana tamin'ny taona 2010. Tamin'izany fotoana izany, ny lehiben'ny kaompaniam-pitaterana Michael O'Leary dia nanjary maloto tamin'ny Fahefana Aviation sivily noho ny filazany fa tsy ilaina ny seza sy fehikibo amin'ny sidina.
"Raha sendra nisy ny fianjerana tamin'ny fiaramanidina iray, tsy avelan'Andriamanitra ny fehikibo," hoy izy. “Tsy mila fehikibo amin'ny London Underground ianao. Tsy mila fehikibo amin'ny zotram-by mandeha amin'ny 120mph ianao ary raha sendra nianjera dia maty daholo ianareo. ”
China's Spring Airlines, mpitatitra tetibola iray hafa, nampiakatra ny vinavinan'ny fanesorana seza herintaona talohan'izay. Ny filohan'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka Wang Zhenghua dia nilaza tamin'izany fotoana izany:
Amin'izao fotoana izao, tsy misy mpandrindra fiaramanidina nanaiky ny fampiasana ny 'seza mijoro' na aiza na aiza eto amin'izao tontolo izao.
Ny etona avy amin'ny volkano dia mandratra mpizahatany 10 ao amin'ny faritanin'i Java afovoany Indonezia
Nifindra tany Duesseldorf androany ny fizahan-tany maneran-tany miaraka amin'i Grand Depart ary mpijery iray tapitrisa